I-Dynamite iza ngamaphakeji amancane | Scrolla Izindaba
I-Dynamite iza ngamaphakeji amancane
UShawdy P isingciphiso segama elithi-Shorty Patricia.
Ngesikhathi lesi sihlabani somculo sikhula, abangani baso babemgcona ngoba wayemncane kakhulu emzimbeni.
Kodwa uPatricia Mokoena usephendule lowo mzimba wamahloni waba yinto enhle. Manje usengumculi osebenza ngezindlela eziningi, u-dynamo wezosokudansa.
UPatricia oneminyaka engu-27 waseTembisa e-Kurhuleni uthe umculo ubuhlezi njalo ukhona egazini lakhe.
UShawdy P ufike neshuni ethi Shushi kowe-2018. Wonke umuntu wayefuna ukuthuthela kuyo.
“Ku-Shushi, ngifake omunye wabaculi besifazane abaphambili abavela e-Namibia kanti ukusebenzisana kwethu kwakhipha ingoma yokudansa eshisa ikhotha .”
Umdanso wakhe uwugesi futhi umdanso wakhe uvusa inkanuko yokudansa.
Indlela yakhe yokugqoka yasesiteji esezingeni eliphezulu nayo imenze waqapha amadoda angeneli ukumbuka.
“Ngingumjabulisi wabantu. Indlela yami yokugqoka kufanele isho njalo. Ngiyakuthanda engikwenzayo futhi nabalandeli bayakuthanda,” uyasho.
Uthe ngesikhathi somvalelo ubematasa esebenza kwi-EP yakhe elandelayo enezingoma ezintsha eziyisithupha ezishisa izikhotha.
“Ngikholelwa ekutheni iNingizimu Afrika izomangala ukuthi i-EP yami iza nani. Ngifuna ukugcina isizwe sidansa ngesikhathi samaholide.”
Uthe into enhle nge-EP yakhe ezayo ukuthi ine-Afro-pop kanye ne-Kwaito okungumculo okhuthazwe ngabathandi beMafikizolo noMandoza ongasekho.
“Ngiyathembisa ukugcina abantu bazo zonke izinhlanga neminyaka bedansa kule EP.”